Kenya willing to help Zimbabwe Cricket - Thatscricket Oneindia
Home » NewsKenya willing to help Zimbabwe Cricket
Nairobi:Kenyan cricket officials said they were willing to host Zimbabwe in a series of One-day internationals after the country withdrew from Test cricket for the next 12 months. "We are prepared to play Zimbabwe in March," said Cricket Kenya (CK) chairman Samir Inamdar on Monday. "We have already talked with Zimbabwe with the view of having their team come here before we leave for Bangladesh." The tour of Bangladesh, which may also involve Zimbabwe will start on March 10. The Kenyans are scheduled to play three One-day internationals against their hosts during the tournament which has been organised through the initiative of the International Cricket Council. Last week, the interim committee of Zimbabwe Cricket (ZC) announced they would not play any more Tests in 2006 although they were still committed to honouring their One-day commitments. The decision was taken after a series of woeful international performances as well as a player strike as members of the national squad became increasingly frustrated with the way the game was being run in the country.
Read more about: test cricket, zimbabwe, country, oneday internationals, chairman, series, officials, ck, monday, march, kenyan cricket, samir inamdar, cricket kenya